2011 | အ င်္လ ကာ ည
သဲတစ်ပွင့် အုတ်တစ်ချက် ပါဝင်လှူဒါန်းကြမလား????
7:36 PM | Labels: ဆောင်းပါး
စဉ်းစားရင်းပြုံးမိသေးတယ်။ ကျနေ်ာသူငယ်ချင်း မလပြည့်ဝန်းအကြောင်းကိုပါ။
ကျနေ်ာသူငယ်ချင်းက အပျိုကြီးဆိုတော့ (ကြုံတုန်းဝင်ကြေငြာပေးတာပါ)
အော်……..အချစ်ဆိုခြင်းရဲ့တုပ်နှောင်စွမ်းကို မသိရှာသေးဘူးလေ။ ကျနေ်ာကတော့ အခုမိသားစုနဲ့ဆိုတော့ သိရှိနေပါပြီလေ။ အချစ်ဆိုတာကို လူတွေက အမျိုးမျိုးအထွေထွေ ပြောကြ ပါတယ်။ ရယူခြင်း၊ ပေးဆပ်ခြင်း အမျိုးမျိုးပေါ့လေ။ ကျနော်က တော့ အချစ်ဆိုသည်မှာ “ပျောက်ဆုံးနေသောကိုယ်တခြမ်း” ရယ်လို့ သာထင်မြင်မိပါတယ်လေ……..။.။
ဟိုးရှေးရှေးခေတ်များစွာတုန်းက လူသားတွေက အလွန်အားကြီးကြသတဲ့ နတ်ဘုရားများကိုတောင် ရန်မူနိုင်ကြတဲ့အထိပေါ့၊ အဲ့ဒီလိုရန်မူနိုင်ကြတော့လဲသူတို့တွေကမာန်မာနတွေလဲထောင်လွှားကြသတဲ့ပေါ့။ (မာန်မာနရယ်၊ အောင်မြင်ခြင်းရယ်ဆိုတာ တိုက်ရိုက်အချိုးကျနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်) အဲ့ဒီလိုပေါ့သူတို့တွေ ဘာကြောင့်အားကြီး ကြတယ်၊ခွန်အားဗလကောင်းကြသလဲ ဆိုတော့ သူတို့မှာ ကျား၊ မ အင်္ဂါ နှစ်စုံ လုံးပါသတဲ့ကွယ်။ အဲ့သလိုမျိုး ပြည့်စုံနေတော့ သူတို့ကနတ်ဘုရားတွေတောင် ဂရုမစိုက်သလိုတွေဖြစ်လာကြတာမဆန်းဘူးထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ နတ်ဘုရားများကစိတ်ဆိုးကြတာပေါ့။ သူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့ နေရာမှာနေရင်း သူတို့ထက် မာနတွေကြီးနေတော့ မကြိုက်တော့ဘူးပေါ့လေ။ မရိုသေမလေးစားရင် ဘယ်လူကြီးမိဘကမှ ချစ်မြတ်နိုးမှာ မဟုတ်တာ သိပ်သေချာတာပေါ့။အဲ့ဒီတော့ ကဲဒီလောက်တောင် မာန်မာနကြီး၊ ရိုသေလေးစားမှုမရှိတဲ့ လူတွေ ဒီခန္ဓာကိုယ်တွေ နှစ်ပိုင်းကွဲစေလို့ ကျိန်စာတိုက်လိုက်တော့တာပေါ့ ။(တပိုင်းသည် ကျား ။တပိုင်းသည် မ အဖြစ် ကွဲကွာ သွားကြတော့ တာပေါ့လေ) အဲ့ဒီအချိန်ထဲက လူတွေဟာ ခွန်အားအရာ ကျဆုံးပြီး မာန်တွေကျသွားလေတော့ နတ်ဘုရားတွေ ကောင်းမွန် စွာအုပ်ချုပ်နိုင်ကြတော့တာပေါ့။ ဒါအပြင် တစ်ကိုယ်ထဲကနေ နှစ်ပိုင်းခွဲခံလိုက်ရတဲ့ အဲ့ဒီကျားနဲ့မတို့ဟာ ပျောက်ဆုံး သွားတဲ့သူတို့ကိုယ်တစ်ပိုင်းကိုရှာဖွေကြရတော့တာပေါ့။
ဒါကြောင့်လဲ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ ပျောက်ဆုံးနေသော ကိုယ်တခြမ်း ကိုရှာနေကြရတာ ပေါ့လေ။တချို့တွေကလဲ သူတို့ရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ကိုယ်တခြမ်းကိုတွေ့လို့ တချို့ကလဲ ရှာကြဖွေကြဆဲပေါ့။
အိမ်ထောင်ကျလို့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ မိတ်ဆွေများကတော့ သူတို့ရဲ့ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ကိုယ်တခြမ်းကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိသူတွေပေါ့လေ။
ကျနေ်ာသူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တဲ့ မလပြည့်ဝန်းကတော့ ဘယ်အချိန်မှာ သူရဲ့ ကိုယ်တခြမ်းလေးကိုရှာတွေ့မလဲဆိုတာကိုတော့.............................
ရပါသည်-တစ်ကြိမ်တော့ရနိုင်သည်။ သို့ သော် အကြိမ်ကြိမ်ယူချင်၍ မရနိုင်ပါ။
ရသည်-တစ်နပ်တော့ စားရနိုင်သည်။ သို့ သော် ထာဝရမရနိုင်ပါ။
တစ်ရာသီစားဖို့ /တစ်သက်တာစားဖို့ သားစဉ်မြေးဆက် စားဖို့ အတွက်တော့ စိုက်ပျိုးရလိမ့် မည်။
ကောက်နှံတွေ ဝေနေသည့်စပါးခင်းကြီးတစ်ခင်းရလိုချင်လျှင် မျိုးစိတ်အနည်းအကျဉ်းတော့ သုံးစွဲရလိမ့်မည်။
မပေးဘဲ ယူလျှင်၊မစိုက်ဘဲစားချင်လျှင် အဲ့ဒီ လူတစ်နေ့ ဒုက္ခရောက်တတ်ပါသည်။
သူနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်နေသောပတ်ဝန်းကျင်လည်း ၎င်းကြောင့်အနှောက်အယှက်တွေ များရလိမ့်မည်။
သူရောကိုယ်ပါ သာယာဖို့ အတွက် ပေးသင့်ပေးထိုက်တာကို ပေးတတ်သော အလေ့အကျင့်မွေးမြူဖို့လိုပါ လိမ့်မည်။
ဒါကို စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံရခြင်းလို့ မထင်ပါနှင့် မျှမျှတတဆောင်ရွက်သော သဘော၊ မိမိက သူတစ်ပါးကို မတရားမလုပ်သော သဘောသာဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် အဲ့ဒီလောက်ကိုပင် ကျွန်တော်တို့ အခါခပ်သိမ်းကျင့်ကြံနိုင်ပါ့မလား????
"ဆရာဖေမြင့်၏ စာဖတ်သမားမှတ်စုများ စာအုပ်"မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပါသည်။
9:41 PM | Labels: ဆောင်းပါး
ငွေပေးလျှင် ဘာမဆိုရသည်ဟု၊ လူတွေပြောကြသည်။
ငွေဖြင့်စားစရာဝယ်၍ ရနိုင်သည်။ အရသာကိုဝယ်လို့မရပါ။
ငွေဖြင့်ဆေးဝါးကို ၀ယ်၍ရနိုင်သည်။ ကျန်းမာခြင်းကို ၀ယ်လို့မရပါ။
ငွေဖြင့်ဗဟုသုတအချက်အလက်ကို ၀ယ်၍ရနိုင်သည်။ ဥာဏ်အမြော်အမြင်ကို ကိုဝယ်လို့မရပါ။
ငွေဖြင့် အရောင်ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်တွေကို ၀ယ်၍ ရနိုင်သည်။ လှပမှုကိုဝယ်လို့မရပါ။
ငွေဖြင့် အပျော်အပါးကိုဝယ်လို့ရနိုင်သည်။ ချမ်းသာသုခကို ၀ယ်၍မရနိုင်ပါ။
ငွေဖြင့်သင်သည် အလုံးစုံသောအရာတို့၏ အခွံအကာများကို ၀ယ်၍ရနိုင်သည်။
It is said that for money you can have everything, but you can’t.
You can have the husk of everything for money, but not the kernel.
“ဆရာဖေမြင့်၏ စာဖတ်သမားမှတ်စုများ” မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပါသည်။
8:58 PM | Labels: ဆောင်းပါး
ကျွန်တော် ဒီနေ့ လုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုနဲ့အပြင်သွားရင်း အမှတ်တမဲ့နဲ့မထင်မှတ်ထားတာလေးတစ်ခု ကိုသွားမြင်လိုက်တယ်။ သွားမြင်တော့ အတွေးတစ်ခုစိတ်ထဲဝင်လာပြီးတော့ ဓါတ်ပုံလေး တစ်ပုံ ကောက်ရိုက်မိလိုက်တယ်၊ ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပါဦးဗျာ….
နေပြည်တော်မှာ မိုးကလေးနှစ်ရက်ရွာလိုက်တာနဲ့ အုတ်ခဲတွေက ဒီလိုဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုတော့ ကျနော်စဉ်းစားမိတယ်….
ဘယ်လိုများ တိုက်တာအဆောက်အဦးတွေကို ဆောက်လုပ်ကြမလဲပေါ့….????
Foundation ကောကောင်းပါ့မလား။ အုတ်ထုတ်တဲ့သူတွေက ဒီလို အုတ်မျိုးကို ဘာလို့ထုတ်ကြ တာလဲဗျာ…မိမိစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်ပဲကြည့်နေကြသလားမသိဘူး.
ဒီလိုအုတ်တွေကို အသုံးပြုမှဖြစ်လာမယ့် အဆောက်အဦးတွေမှာ လူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကို လည်း သတိ ကောထားမိပါ့မလား။။။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ထုတ်လုပ်တဲ့အုတ်ကို မျက်နှာလွဲခဲပြစ်မလုပ်ပဲ အရည်အသွေးမှီအောင် ထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲလို့ပါ။ Win & Win နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးကိုကြည့်သင့်တယ်လို့ မဆီမဆိုင်တွေးရင်း ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။